Romance: chii zvazviri, hunhu, mhando uye kudanana senge inoverengeka | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | | Nhetembo
Kune akawanda mabhuku emhando, mamwe anozivikanwa zviri nani kupfuura mamwe. Uye mukati memhando yenhetembo, pamwe nerondedzero, tinogona kuwana rudo.
Asi, Chii chinonzi kudanana? Chii chinoratidza? Sei kune vaviri? Kune vanyori vakakura ve rudo? Zvese izvi nezvimwe ndizvo zvatichazotaura newe zvinotevera.
1 Chii chinonzi kudanana?
1.1 Romance senhetembo
1.1.1 Hunhu hwerudo
1.2 Kudanana senge rondedzero
Chii chinonzi kudanana?
Izwi rekuti kudanana rinoreva pfungwa mbiri dzakasiyana, ese ari maviri ezvinyorwa, asi panguva imwechete akaparadzanisa iwo. Uye ndezvekuti iwe unogona kuwana:
Nhetembo. Izvi zvaive zvakajairika mutsika dzemuromo dzeSpanish, kunyangwe ichigona kuwanikwa muSouth America Izvo zvinoenderana nekubatanidza octosyllables yakakwenenzverwa musonance mune kunyange mavhesi.
Rondedzero. Ndokureva, iri rurefu nyaya mune iyo nyaya yenyika yekufungidzira yakaudzwa kwaigara vatambi mamiriro "anoshamisa uye asina kujairika" mamiriro.
Mukupedzisa, tinogona kutaura newe nezverudo munzira mbiri dzakasiyana. Uye kuti zvijekese kwauri, isu tichava navo pazasi.
Kudanana, sezvatambotaura, inhetembo. Yakanga iri hunhu, uye yakashandiswa, muchiSpanish, chiIberia neLatin America tsika uye inozivikanwa kunyanya muzana ramakore rechi 1421. Muchokwadi, chekutanga pane humbowo (nekuti hazvizivikanwe kana paive nezvimwe zvisati zvaitika), ndeyaJaume Olessa, kubva muna XNUMX.
Uye chii chinoratidza kudanana nhetembo? Zvakanaka tinotaura nezvazvo Nhetembo dzekurondedzera, dzakagadzirirwa kuti dziimbwe nevanotambudza kana varidzi venyama. Vakataura nyaya ine dingindira rakasiyana, uye nemitinhimira yakasiyana zvinoenderana nenzvimbo yavaigara.
Nhetembo iyi inoonekwa nekuumbwa muzvikwata zvemavhesi. Imwe yeiyi mavhesi ine ma syllable masere uye nhetembo dzakabatana mundima dzakaenzana. Mukuwedzera, zvakajairika kusangana mazwi ekudzokorora (mutinhimira), kushandisa zvakasununguka nguva dzezviito, kuita misiyano, uye nekuguma nekukasira, sekunge zvakatemwa kamwe kamwe.
Zvimwe zvinhu zvinotevera:
Itsika yemuromo. Izvo hazvifanire kukanganikwa kuti idzi dzerudo dzai "imbwa "kana kurondedzerwa kuburikidza nevaimbi uye vatamburi, ndosaka vanyori vasingazivikanwe nekuti hapana akanyora zvavakataura. Uye ndosaka iwe uchigona kuwana, yedzimwe nhetembo dzerudo, shanduro dzinoverengeka zvinoenderana nekuti ndiani akazviteerera kana nharaunda yayaiimbwa.
Kurondedzera uye nhaurirano zvakasanganiswa. Izvi zvakajairika munhetembo, asi pano zvinogona kuve zvakajairika kudanana. Muchokwadi, pane mafomula anodzokororwa mune dzakasiyana siyana dzerudo, sekuti "Pane akataura ... zvakanaka uchanzwa zvaachataura", kana "Akamupindura ... mhinduro yakadaro yaaizomupa. "
Inotarisa pane imwe nguva. Haisi rondedzero inotanga nekuverenga kubva pakutanga, asi inotarisa pachokwadi kana chiito chekuudza zvinoitika. Zvisinei, zvinopera zvechimbi-chimbi, zvichisiya nechakavanzika chekusaziva kuti mhedzisiro yezvaanotaura ndeyei.
Iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Semuenzaniso, kudzokorora, anaphoras, zvakafanana, zvinyorwa, mifananidzo inonzwika, mifananidzo ...
Mukati meiyi nhamba yekunyora, tinogona kuwana mhando dzakasiyana dzerudo, zvinoenderana nenzira yatinonyora.
Kana iri nekuda kwekuverenga kwayo nguva, isu tinowana maviri marudzi:
Old Romancero. Ndiyo yakanyanya "yepakutanga" uye "yetsika yekudanana. Vanyori vayo havazivikanwe uye yakashandiswa muzana ramakore regumi nemana negumi nemashanu, nemuromo.
Bhalla nyowani. Panyaya iyi, ndidzo nhetembo dzakabuda pakati pezana remakore rechiXNUMX nerechiXNUMX. Pano tinoziva vamwe vanyori vakaita saAlexander Machado, Quevedo, Cervantes, Luis de Góngora, Juan Ramón Jiménez ...
Kana tikataura nezve dingindira, kudanana kunogona kusarudzwa se:
Nhoroondo dzerudo. Seizvo zita ravo rinoratidzira, ivo vanotaura enhoroondo kana enhoroondo nguva, kunyanya zvine hukama neyakaenzana Spanish. Vamwe vevanonyanya kuzivikanwa ndiEl Cid, Kufa kwaPrince Juan, Bernardo del Carpio ...
Epic kudanana. Idzi dzerudo ndidzo dzinotungamira kuve humbowo hwemagamba enhoroondo, nekudaro iwo aCharlemagne, hondo yeRoncesvalles, kana nziyo dzechiito dzinogona kuwira muchikamu ichi.
Miganhu. Izwi iri rinoreva nguva dzinoitika pamuganhu weSpain. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa ndeye, pasina mubvunzo, yeyekurwira mukuhwikwidza kunorwisa maMoor.
Romance kudanana. Kufuridzirwa neSpanish ngano, iwe unowana dzakasiyana misoro, asi inogara iri fungidziro, uye zvichibva pane kuzviisa pasi kweanose anoimba kana kuirondedzera.
Chinyakare kana bofu kudanana. Ndiro rinonyanya kunakidza kudanana. Avo vakataura nezve zvinoitwa nemakororo, zvishamiso, mhosva ... Imwe yeakakurumbira ndeye, pasina mubvunzo, iya yaFrancisco Esteban.
Kana iwe uchine kusahadzika pamusoro pekuti kudanana mune nhetembo chii, kana chimiro hachina kujeka kwauri, ngationei nemimwe mienzaniso yatinokusiira pazasi. Ndokumbira utarise kuti kune zvakawanda zvakasiyana, kuva iye chaiye anokwanisa kugadziriswa (pane mamwe aive romancillos, aine mavhesi asinganzwisisike, rwiyo rwemariro, rwaigona kutendeseka; kana iro remagamba, raigona kutendeseka).
Kana mambakwedza achindimutsa 8-
ndangariro dzedzimwe albas 8a
vanozvarwa patsva muchipfuva changu 8-
dzaive tariro. 8a
Ndinoda kukanganwa nhamo 8-
izvo zvinokuwisira pasi, murombo Spain, 8a
mupemhi anouraya 8-
kubva kurenje reimba yako. 8a
Yevhu rakaumbwa 8-
munotengesa, hama, matumbu 8a
reropa rakabikwa muhope 8-
iyo inoshumira semweya wako. 8a
Kutanga zuva 8-
guta rino, iro rinotova ne8a
zita raCiudad Chaiye, 8-
akabatana negorant master 8a
zviuru zviviri zvevana vane ruzivo 8-
yeavo vakashinga, 8a
uye mazana matatu vakatasva bhiza 8-
yevanhuwo zvavo uye mafirigi…. 8a
Lope de Vega. Fountainovejuna
Girini ndinokuda iwe girini 8-
mhepo yakasvibirira. Green matavi. 8a
Ngarava iri pagungwa 8-
Uye bhiza pagomo. 8a
Nemumvuri pachiuno 8-
anorota pakutuka kwake, 8a
nyama yakasvibirira, bvudzi rakasvibirira, 8-
nemaziso esirivha inotonhora. 8a
pasi pegypsy sirivheri, 8a
zvinhu zviri kumutarisa 8-
uye havagoni kuzvitarisa. 8a
Kudanana senge rondedzero
Kune rimwe divi, isu tine rudo sekurondedzera. Iyo inozivikanwawo se «roman», iri yakareba prose nyaya inobata nenyaya yenyika inofungidzira. Mariri, vese mavara uye mamiriro ezvinhu, kutaura zvishoma, zvinoshamisa uye zvisina kujairika.
Kwayakabva kwayo kwakabva kune yakakwira Middle Ages, XNUMXth uye XNUMXth century, apo chiLatin chakashanduka nenzira dzakasiyana muhushe hwekare hweRoma. Nekudaro, akasheedza aya akasiana-siana emutauro wechiRoma; nepo avo vakachengetedza mutauro wechiLatin vachiudzwa kuti yaive yetsika yepamusoro. Pakatanga mabasa echiLatin kududzirwa mumitauro yeRomance, mazwi enromanzier, romanzare, uye kubva ipapo kuenda kuromanz, romant, kana romanzo yakasimuka.
Muzana ramakore rechigumi nemashanu, zvese nyaya dzerudo uye nhetembo dzerudo dzakagara pamwechete. Asi nhetembo iyi yaive yakakosha zvekuti rondedzero yakatora rimwe zita kuti isavhiringidza. Uye chaive chii? Zvakanaka, isu tiri kutaura nezve "novella", izwi rinoreva "utsva", uye rakakwanisira kudanana uku se "pfupi" nyaya yechimwe chinhu chitsva uye chinoda kuziva.
Zvechokwadi, - kuSpain iyi genre raidaidzwa kunzi novel kana bhuku, Hazvina kumbowana mukana we "kudanana" sezvazvakaita mune dzimwe nyika dzeEurope.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Rudo
Mabhuku akanakisa eakavanzika